မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အားကစားကွင်း တိုက်ခန်းရှေ့ တွင် Crown အဖြူရောင် ယာဉ်ပေါ်မှ ငွေကျပ် ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ မတ် ၉
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြို့ သစ် (၂) ရပ်ကွက် ၇၃ လမ်း ခိုင်ရွှေဝါ လမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းကြား မြို့ နယ် အားကစားဘောလုံးကွင်း တိုက်ခန်း အခန်းအမှတ် (၃၈) ရှေ့ တွင် မတ် ၉ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲက လွန်ခဲ့သည့်လေးရက်ခန့်က ရပ်နားထားသော 3L/1808 Toyota Crown အဖြူရောင်ယာဉ် ပေါ်မှ ငွေကျပ် ၁၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးမှုကြောင့် အမှတ် (၁၁) နယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဒုရဲအုပ် ဇော်နိုင်နှင့်နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့သစ် (၂) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ မြို့နယ် အားကစားဘောလုံးကွင်းတိုက်ခန်း အခန်းအမှတ် (၃၈) ရှေ့တွင် ရပ်နားထားသော 3L/1808 CROWN Royal Sallon အဖြူရောင်ယာဉ်အား သော့ပြင်ဆရာခေါ်ယူ၍ ကားတံခါးများဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးရာ ကား ရှေ့ခန်းအတွင်းမှ ပန်းရောင်မူးယစ် ဆေးပြားအထုပ်နှင့် ဆာလာအိတ်များဖြင့် ထည့်ထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများအား တွေ့ရှိသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူး ကြီးမြင့်ဦး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူး ကြီးမျိုးအောင်တို့အားတင်ပြပြီးနောက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီးမူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု၊ အမှတ်(၁၈)မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (တောင်ပိုင်း)၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးစံသူတို့နှင့်အတူ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်အား ကရိန်းကားဖြင့် အမှတ် (၁၁) နယ်မြေရဲစခန်းသို့ သယ်ဆောင်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိသော အမှတ် (၁၁) နယ်မြေရဲစခန်းသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်းတို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး တရားခံများဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်သွားရန်မှာကြားခဲ့သည်။ ”မန္တလေးကို မူးယစ်ဆေးဝါး တွေ ဝင်တာကတော့များနေမှာပဲ။ မန္တလေးကဆုံရပ်ဖြစ်နေလို့ပဲ။ မန္တ လေးကထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဝင် ပေါက်တွေအကုန်လုံးရှိနေတော့ဝင်လာတယ်။ ဒီကနေပြန်မဖြန့် နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး လုပ်နေတယ်။ မိတာတွေကတော့အများကြီးပဲ။ စဉ်ဆက်မပြတ်မိနေတာပဲ။ သွင်းတဲ့သူကလည်း လောဘသား တွေဆိုတော့သွင်းနေမှာပဲ။ ရနိုင်သမျှအကုန်ဖမ်းပြီး တရားစွဲဆို နေတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက ဖမ်းမိတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ နောက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းမိတာနည်းသွားတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဖမ်းမိတာသည် နည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့တန်ဖိုးက ၁၄ ဘီလီယံအထိများနေတဲ့အတွက် တရားခံတွေဖမ်း မိအောင်လိုက်ရှာသွားမယ်”ဟု မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
”ရပ်ကွက်နေပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ သတင်းပေးမှုကြောင့် သွားစစ်တယ်။ ကားကိုသော့ဖျက်ပြီး ကြည့်တော့ မူးယစ်ဆေးတွေ အများအပြား တွေ့တယ်။ ဒါနဲ့ကားကို အမှတ် (၁၁) နယ်မြေရဲစခန်းကိုသယ်ပြီးဆက်ရှာဖွေတော့ မူးယစ်ဆေးပြား၊ ဆပ်ပြာခွက်နဲ့ဆေးရည်တွေ တွေ့ ရတယ်။ ပိုင်ရှင်မည်သူမည်ဝါဆို တာကိုတော့ စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေ တယ်”ဟု ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးကြီး မျိုးအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ယာဉ်ပေါ်တွင် 88/ 1 စာတန်းပါ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေး ပြားနှစ်သိန်းပါ ဆာလာအိတ် ငါးအိတ်နှင့် ဆေးပြားခြောက်ထောင်ပါ အထုပ်တစ်ထုပ်၊ WY စာတန်းပါပန်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေး ပြား နှစ်သိန်းပါ ဆာလာအိတ်ကိုး အိတ်၊ R စာတန်းပါ စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြား ၁၅၈ဝဝ၊ စုစုပေါင်း စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၂၈၂၁၈ဝဝ ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၄၁ဝ၉ဝ၊ ဆပ်ပြာခွက်တစ်ခွက်လျှင် ဘိန်းဖြူမှုန့်အလေးချိန် ၁ဝ ဂရမ်ပါ ရောင်စုံဆပ်ပြာခွက် ၂၂ဝ၊ အလေးချိန် ၂ ဒသမ ၂ ကီလို ဂရမ် စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၅၄ဝ၊ ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံး တစ်တုံးလျှင် ဂရမ် ၃၅ဝ ပါနှစ်တုံး၊ အလေးချိန် သုညဒသမ ၇ ကီလိုဂရမ် စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၄၉ဝ၊ အဖြူရောင်ပလတ်စတစ်တစ်အိတ်လျှင် ဘိန်းဖြူမှုန့် အလေးချိန်ဂရမ် ၃ဝဝ ပါ ခြောက်အိတ်၊ အလေးချိန် ၁ ဒသမ ၈ ကီလိုဂရမ် စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၂၆ဝ ၊ ICE အလေးချိန် တစ်ကီလိုပါတစ်ထုပ် ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝဝ၊ Pseudoe phedrine ဆေးပြားအ ကြေအမှုန့် အလေးချိန်ဂရမ် ၁ဝဝ ပါ တစ်ထုပ် စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ်လေးသိန်း၊ Sodium Hydroxide သုညဒသမ ၁၅ ကီလိုပါ တစ်ထုပ်နှင့် 3L/1808 Toyota Crown အဖြူရောင်ယာဉ်၏ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြားတစ်ခုတို့ကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ်(၁၁) နယ်မြေရဲစခန်းမှ မူးယစ် (ပ) ၅/၂ဝ၁၈၊ မူးယစ်ပုဒ်မ- ၁၉(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားရှိပြီးနယ် မြေရဲစခန်းနှင့်အတူ မူးယစ်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ တရားခံဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း သင်္ချာဘာသာရပ် ဖြေဆိုသည့်နေ့တွင် လာရောက်ဖြေဆိုရန် ပျက်ကွက်သူ ၁၃ဝဝ ကျော် တို?
မလေးရှားကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ အန်ဝါအီဘရာဟင်က ပေါ့ ဒစ်ဆင်မှ ဝင်ရောက်အရွေးခံ